Oghere Bụ Omume Kasị Elu nke Minimalism
Home / Imepụta ime ụlọ / Oghere Bụ Omume Kasị Elu nke Minimalism
2020 / 10 / 14 nhazi ọkwaImepụta ime ụlọ 1253 0
Ebuka Eos Interior Design Alliance
AVISTUDIO bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngosipụta ihe ngosi na Ukraine nwere ọkwa dị elu nka na nsonazụ ime. Ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ na-eto eto ma na-arụsi ọrụ ike, ndị otu ahụ na-ekwusi ike mgbe niile na ejiji na nkasi obi na imewe ahụ, na-ekwenye na usoro kachasị mma dabere na atụmatụ "ndị mmadụ".
Ihe a haziri nke kacha nke minimalism na-agba ọsọ oge niile, yana mfe siding + corrugated board na ndabere nke sofa, na ọdịdị dị mfe mana ọkaibe.
Minimalism abụghị ezumike ọdịnala, mana ọ na-eleba anya na mmekọrịta dị n'etiti ihe, na-ebuli ogo nke ihe ọ bụla ma tinye ya na ọrụ ahụ, nke mere na mmetụta ahụ dị mfe mana ọ bụghị obere.
A na-eme ọkụ ọkụ na nkuku mgbidi ahụ, ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ na-eweta okpomọkụ na oghere oyi.
Oghere kichin mepere emepe n'ozuzu ya dị na ụda ojii dị jụụ, yana onye na-eji ihe eji eme ihe kwekọrọ na ibe ya, ìhè na onyinyo na-eme ka usoro ịmị mma kwekọọ, dị ike ma nweere onwe ya, na-ewuli ọkwa na ọnọdụ nke oghere ahụ.
Kalama na ite mara mma na-egosipụta mmụọ nke ndụ, na obere ahịhịa ndụ na-eme ka ahịhịa na mbara.
Igwe ọkụ na-agbakwụnye n'ahịrị na-agbakwunye echiche nke ejiji na mgbanwe na oghere, na -emepụta ọnọdụ ezinụlọ na-ekpo ọkụ na oghere ọcha dị jụụ.
Ime ụlọ ahụ na-aga n'ihu n'echiche nke minimalism, na nchikota nke arịa ụlọ na ọkụ ọkụ na-eme ka amara nke ohere dị mkpa, na ịhapụ nnwere onwe mgbe ejidere ndụ.
Whitecha ọcha na-acha ọcha bụ na mbụ agba nke na-eme ka ahụ na uche zuru ike, ebe sara mbara sara mbara na windo zuru oke na-enye gị nkasi obi kachasị.
Ihe mara mma nke ihe na ọnọdụ nke oghere ọcha na-etolite ụlọ akwụkwọ nke aka ha na ngosi nke oghere, a na-akpọkwa ọmarịcha nka nke oghere na obere ụzọ. Grayda na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ nke oghere na-eweta mma dị jụụ ma mara mma, na-eme ka ohere niile dị mma na ịdị ọkụ na ịdị mfe.
Ọnọdụ zuru oke nke oghere ọmụmụ a dị nro ma dịkwa jụụ, na-eweta ọnọdụ dị jụụ ma mara mma. Calmdị dị jụụ na nke siri ike na ọtụtụ ụdị ihe dị iche iche na-eweta oghere nke oge a, ikuku siri ike ma dị ụtọ.
Ime ụlọ nwanyị ahụ, jupụtara na nka nka, jikọtara ndụ na ọchị. Designdị ọ bụla yiri ka ọ dị mfe, mana ọ bụ onye mebere ya na-adabere na ndụ ma na-eme ka ndụ baa ọgaranya. Agba pink dị nro na -emepụta ụwa dị mfe ma dị mma.
A na-eme kabinet ụlọ ahụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ dị ka ọnụ ụlọ dị n'elu ọnụ ụlọ ahụ, a na-etinyekwa oche na ihe ndina ya. Egwuregwu egwu na-ezute olileanya ụmụaka niile maka ohere nke aka ha, ọ bụghị naanị na-egbo mkpa ọrụ, kamakwa igbo mkpa ime mmụọ.
Bathroomlọ ịsa ahụ ahụ dị oke mbara, sara mbara na bat ịsa ahụ dị iche iche na ebe a na-asa ahụ. Iji nọgide na-enwe mmetụta anya nke oghere, onye mmebe ahụ họọrọ iji taịlị na naanị otu mgbidi, nke na-arụ ọrụ nke ọma na oghere nwere ezigbo ikuku na ọkụ.
A na-etinye mgbidi dị iche iche na mgbidi dị iche iche iji gboo mkpa nke iji abalị. Isi mmalite ọkụ nke dị n’elu-ụlọ na-agbakwunye echiche nke mgbatị kwụ ọtọ na oghere ahụ.
Bathroomlọ ịsa ahụ ọha na eze dị na ala ala ma ọ dịghị achọ ohere dị ukwuu maka iji ya kwa ụbọchị, na ngwaike ojii na-ejedebe na ihe adịchaghị adị na mbara.
Nke gara aga :: Na-eju anya site na Mma nke Nkịtị, Na-eji Sunken mepụta Createlọ Utopian Na |wa | Atụmatụ Tatsuo Osote: Kpochapụwo Black na White Grey Wood, Mfe udiri Casual | Ekike Aizhu